Ny paikadim-pifandraisanay tsara amin'ny mailaka tsara indrindra | Martech Zone
Ny paikadim-pifandraisanay tsara amin'ny mailaka tsara indrindra hatrizay
Alahady 21 Febroary 2016 Alatsinainy 22 Febroary 2016 Douglas Karr
My podcast marketing mpiara-miasa, Erin Sparks, dia tia manome ahy fotoana sarotra momba ny paikadintsika opt-in momba Martech Zone. Alohan'ny hiresahantsika ny zavatra notsapainay sy izay mandeha dia tokony hazavaiko ny maha-zava-dehibe ny mailaka. Raha mijery famoahana an-tserasera ho toy ny masinina ianao, ny fisamborana ireo adiresy mailaka dia - hatreto - ny fomba mahomby indrindra ny famerenana ireo mpitsidika mifandraika amin'ny tranokalanao.
Raha ny marina dia handeha hiteny aho hoe ny lisitry ny adiresy mailakao no paikady fitsikerana sy tsara indrindra ananan'ny tranokalanao. Izany no antony nanangananay ny serivisy mailaka ho an'ny WordPress. Ny toetoetran'ny mpanjifa mitombo ao amin'ny tranokalanao dia ny metrika tsara indrindra amin'ny fanekena ny fahasalamana sy ny firotsahana ny atiny. Rehefa misy mpamaky misoratra anarana sy mandray anao ao anaty boaty (izay mety efa feno) dia midika izany fa matoky ny sanda entin'ny orinasanao ianao.
Fampahafantarana ny Tongasoa Tongasoa
Izahay dia nanandrana fitaovana iray taonina hanandramana alao ny adiresy mailaka ataon'ireo mpitsidika anay ho an'ny taratasim-panoratanay - fa hatramin'izao dia iray ihany no nahavita tsara. Azo antoka fa mahazo adiresy mailaka etsy sy eroa izahay miaraka amin'ireo fitaovana ampiasainay. Ary hialana amin-kitsimpo ny tetikady hitaomana ny mpitsidika hisoratra anarana toy ny takelaka sy fanomezana. Tianay ny mpamandrika tena izy izay misoratra anarana satria fantatr'izy ireo ny sanda entinay amin'izy ireo. Ny gazetinay dia manolotra atiny isan-karazany hatrany ho an'ny matihanina amin'ny varotra sy ny varotra hikarohan, hahita ary hianatra ny fomba fampiasana teknolojia marketing hanatsarana ny valin'ny orinasa.
A tongasoa tongasoa dia pejy feno izay miseho ho an'ireo mpitsidika vaovao, manosika ilay tranonkala hidina amin'ilay pejy ary mangataka amin'ilay mpitsidika hisoratra anarana. Ao amin'ny tranokalanay dia toy izao:
Tsy mandeha fotsiny izany, fa mandaitra tsara. Na dia tetika hafa aza dia mety hahatonga antsika mpanjifa am-polony am-polony isam-bolana, ny Welcome Mat antsika dia mahazo mpanjifa am-polony vitsivitsy. isan'andro. Raha ny marina, indray andro dia nanana mpanjifa 100 nifidy izahay. Ny Welcome Welcome Mat dia niova fo in-100 mahery mihoatra ny tetika hafa naparitakay.
Tsy toy ny popup iray manelingelina ilay olona aorian'ny famakiany, ity fomba ity dia mangataka azy ireo hisoratra anarana alohan'ny hanombohany. Raha tsy tian'izy ireo izany dia miteny fotsiny izy ireo na manakorisa ny pejy. Manome antsika ny fotoana hanemorana ny fampisehoana opt-in indray ny sehatra. Ary afaka manandrana kinova samihafa izahay amin'ny alàlan'ny fanatsarana fitaovana hijerena raha miasa tsara kokoa noho ny iray hafa ny olona iray.
Mitombo miaraka amin'ny SumoMe ny tranokalanao
The Welcome Mat dia iray amin'ireo fitaovana miasa sy mahomby maro hampitomboana ny taham-panovana ny tranokalanao. SumoMe napetraka sy namboarina amin'ny tranokala 200,000 XNUMX mahery izao ny fitaovana fifamoivoizana! Ary ny tsara indrindra - ny sehatra dia manome fitaovana mihoatra ny am-polony hanampy anao hitarika fiovam-po sy hampitombo ny zava-bitan'ny tranokalanao.
Raha manana tranokala WordPress ianao, SumoMe dia manolotra Plugins WordPress ihany koa hanombohana anao amin'ny fomba mora. SumoMe koa dia manana plugin Chrome, manao ny fidirana amin'ny fitaovan'izy ireo ho tsotra toy ny tsindry bokotra iray. Ny tsara indrindra dia manisy fomba vaovao foana izy ireo hampitomboana ny lisitry ny mailakao, handrisihana ny fizarana ara-tsosialy ary handrefesana ny zava-bitan'ny tranokalanao amin'ny alalàn'izy ireo Analytics fitaovana.
Niara-niasa tamin'ny SumoMe izahay hanombohana anao - misorata anarana ankehitriny hahazoana fidirana amina fitaovana am-polony ao tsy misy vidiny!
Andramo maimaim-poana i SumoMe!
BigCommerce dia mamoaka lohahevitra E-commerce 67 vaovao
Dean Oakes (@deanoakes91)
22 Feb 2016 tamin'ny 9:15 maraina
Asa tsara Douglas. Notsindriko tao amin'ny Twitter ny rohy ary azo antoka fa notsenain'ny tsihy tonga soa izay nanoratanao. Tsy misakana ny votoaty ho hitako eo fa mbola tena hita.
Tsy nametraka ny adiresiko mihitsy aho, fa mety ho azonao aho amin'ny manaraka 😉
22 Feb 2016 tamin'ny 9:39 maraina
Efa nanandrana ny efijery fisamborana fitarihana mipoitra ve ianao A/B rehefa mandao ny tranokala ny mpampiasa? (Ecran feno toy ny “Welcome Mat” dia lasa “Bye-bye Mat” ohatra 😉)
Satria tsy hitako ny antony mahatonga ny mpampiasa iray, tonga voalohany amin'ny tranokalanao hamaky lahatsoratra iray, dia mety ho "very" ny fahafahana mamaky an'io lahatsoratra io amin'ny fanomezana ny adiresy mailaka avy hatrany (ary mety ho alefa any amin'ny hafa. pejy) raha tsy mamaky aloha ny lahatsoratra mihitsy mba hahafantarana raha tena mendrika ny hamela ny adiresy mailaka ny kalitaony…
Raha nanao an'io fitsapana A/B io ianao taloha, ahoana no hanazavanao fa mety ho vonona kokoa ny olona handao ny adiresiny mailaka alohan'ny hamakiana ny atiny fa tsy aorian'ny famakiana ny atiny?
Febroary 22, 2016 amin'ny 4:39 PM
Mahaliana, Toni. Tsy manam-pahaizana momba ny famolavolana tranonkala aho na amin'ny fomba rehetra. Ahoana no hataonao amin'ny fampiharana izany raha miala amin'ny tranokala izy ireo? Miaraka amin'ny pop-up rehefa manindry "x" izy ireo?
Febroary 23, 2016 amin'ny 3:45 PM
Hey Dean, ny tetika ampiasaina dia antsoina fivoahana, dia script izay mijery ny hafainganam-pandehan'ny tondro totozy sy ny tari-dalana. Rehefa manosika ny totozy mankany amin'ny bara adiresy na bokotra miverina ilay olona, ​​dia mipoitra ny popup.